Uhlelo okukhethekile sokuhlukanisa drive kanzima kubizwa ngokuthi umhleli we sigaba. kukhona ithuluzi esakhelwe e-Windows uhlelo lokusebenza elikuvumela ukuba enze konke zokukhwabanisa eyisisekelo, kodwa akuyona elula kakhulu. Isihloko kuzoxoxwa njengoba ukusetshenziswa yangaphakathi Windows Tinsita imikhiqizo third-party.
Idiski Management - ithuluzi ejwayelekile ezifakwe Windows. Kuzoqalwa nge-Windows Vista, lokhu Umbuso uye zashintsha kancane kakhulu. Kodwa ezinguqulweni ngaphambili kwe-OS, uyisebenzisa, akunakwenzeka ukuba sifeze Ukuhlukaniswa idrayivu kanzima. XP, isibonelo, vumela kuphela ukufometha ukwahlukanisa noma ukushintsha incwadi drive.
Indlela elula ukusebenzisa ithuluzi - chofoza ngakwesokudla isithonjana "Computer" ku kwimenyu pop-up, ". Ukuphathwa" chofoza emgqeni Vula iwindi Administration lapho kumelwe ukhethe "Disk Management".
Lapha uzothola zonke oshayelayo computer (HDD, yeflophidiski, idrayivu laser amadiski, flash ngemoto). Uma idrayivu has ngodonga eziningi, izokwethulwa ngesimo idayagramu.
Ukuze uthole ukuthi iziphi izinyathelo eziyisisekelo zingaba akhiphe lolu hlelo ukwehlukana idrayivu kanzima, kufanele chofoza ngakwesokudla ukwahlukanisa.
Vula - ukuqalisa Explorer ukubuka amafayela.
Setha Active - kubonisa okuyinto ukwahlukanisa ohlelweni ngeke ufune Loader ebhuthini. Uma sisebenzisa lokhu kudiski okungalungile, uhlelo lokusebenza ngeke besakwazi ukusebenzisa.
Shintsha incwadi - kuyinto ngokunengqondo kucace ukuthi iqembu zizoshintsha incwadi ivela iwindi Explorer.
Ifomethi - ukushintsha lwesistimu yamafayela kanye / noma usayizi cluster. Ngemva lo msebenzi, yonke idatha izosuswa.
Nweba Volume - uma kukhona isikhala kwi HDD kumakwe njengokwenziwe ubuningi, ungakwazi ukwandisa ubukhulu ukwahlukanisa.
Nciphisa ivolumu - kunciphisa ubukhulu ukwahlukanisa, kodwa kudala isikhala unallocated engasetshenziswa ukuze sandise umthamo.
Susa ukuthi - uma uchofoza ingxenye nto ngeke usaba khona. Idatha egcinwe ku-ivolumu kunzima kakhulu ukuthola i-emva kokuhlinzwa ezinjalo.
Ngakho, ukuze udale ivolumu ezingaphezu kweyodwa, uhlelo yokuhlukanisa idrayivu kanzima kumelwe kuqala cindezela ukwahlukanisa olulodwa, bese wakha esisha.
Noma yimuphi operation iqala ngokushesha ngemva kokuqinisekisa amkhethile.
EaseUS Hlukanisa Master ingalandwa mahhala ukusetshenziswa kuma-computer asekhaya. Umsebenzi wayo akugcini nje usayizi ngodonga nokwakha amasha, kodwa futhi eziningi ezengeziwe. On the sinazo akunakubangelwa mhlawumbe wokuthi ukungabi bikho kokuhlolwa kwasendaweni isiRashiya.
Ngo kuwindo kuyoba uhlu ngemoto izimpawu zabo phezulu futhi phansi izindawo zabo. Ngemva kokuchofoza kunoma iyiphi ivolumu ukuvula imenyu yengqikithi nazo zonke izenzo kungenzeka.
Shintsha usayizi / Move - ushintshe usayizi ivolumu.
Kopisha ukwahlukanisa - ngokudala ukwahlukanisa esibukweni kwenye disk ngokomzimba.
Hlanganisa ngodonga - uhlangane amavolumu eziningi kuphume esisodwa.
Guqula ilebula - uphawu (umbhalo oqoshiwe eduze incwadi drive).
Defragment - Defragment, kwenziwa uhlelo ejwayelekile ukuthi yakhiwe ohlelweni lokusebenza.
Hlola ukwahlukanisa - hlola ivolumu amaphutha. Njengoba kunjalo nge defragmentation esebenzisa indinganiso Windows amathuluzi.
Fihla ukwahlukanisa - ukufihla iqiniso uhlelo lokusebenza ngesikhathi esifanayo ngeke ukukhwezwa futhi uboniswa ku-Windows Explorer.
Susa ukwahlukanisa - le ndlela kuzosusa ukwahlukanisa.
Ifomethi ukwahlukanisa - ukushintsha uhlelo ifayela noma usayizi cluster. Kulokhu, yonke idatha izosuswa.
Sula ukwahlukanisa - yokuhlanza ephelele ulwazi ngaphandle ukufomatha.
Njengoba kunjalo nge esakhelwe-Windows ithuluzi, ukwenza mqulu omusha, uhlelo yokuhlukanisa idrayivu kanzima kumelwe kuqala ukwehlisa ekhona, bese wakha esisha esikhaleni unallocated. Qaphela, kungenzeka kakhulu ngendlela edingekayo ukuze uhlele, kodwa ngokucindezela noma yiziphi izinguquko angeke zisetshenziswe inkinobho "Faka".
Non-uhlelo ngodonga baguqulelwa ngqo uhlelo lokusebenza, Uma izinguquko kuthinte C:, kuyodingeka kabusha kwe-disc.
Izinzuzo esemqoka EaseUS
Uhlelo ukwehlukana hard drive yakho has a lot of izici ewusizo.
Ukusebenza angeke zisetshenziswe lize icindezelwa inkinobho "Faka", kusho ukuthi ungakwazi ukukhansela izenzo eyiphutha.
Kuyinto ozinzile futhi uzama ngangokunokwenzeka ukuze kuvikelwe idatha yomsebenzisi. Ngokwesibonelo, uma ukopisha idatha zazo azoshintsha, uhlelo Ngeke kuqale umsebenzi walo, isixwayiso umsebenzisi ukuthi okokuqala kuzomele ugcwalise zonke izinqubo usebenzisa disc.
Uhlelo imahhala ukusetshenziswa ekhaya.
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela kwasendaweni isiRashiya.
Inani elikhulu izici kungaba ukudida imfundamakhwela.
Serious hardware noma isofthiwe ukwehluleka kuzoholela yokuthi yonke idatha izolahleka emva hard drive division. (Lesi simo akunakwenzeka uma imishini ngendlela efanele).
Paragon Hlukanisa Manager
Lolu hlelo lokusebenza ubuye khulula. Njengoba ngonyaka odlule, akukho isiRashiya. Kuwindo kuyinto EaseUS ezifanayo. Uhlelo Kwethulwa ifakwe wonke amathuluzi ejwayelekile: ushintshe usayizi ngodonga, ukudala entsha, ukulikopishela ivolumu nazo zonke isakhiwo ifayela ngakolunye lo HDD, hlola amaphutha, ufometha, ukuhlanganisa amavolumu.
Izinzuzo Paragon Inkampani Mkhiqizo
Visual ukubukeka amafasitela, okwenza kube lula ukuqonda ngisho uhlelo saqala.
Izinga eziphakeme zokulondeka. Kusukela hard disk division, i-Windows 8 izokwazisa umsebenzisi uma sengcupheni yokukhiqiza ukulahleka kwedatha, uphinde ubuze futhi ukuthi ukumhlinza.
Ngokuphelele free ukusetshenziswa ekhaya.
Nemibi Paragon Hlukanisa Manager
esibonakalayo isiZulu ngokuphelele.
Nokho, Mode Express Mode elenziwe lula ukusetshenziswa, efihla eziningi izici ewusizo.
isivinini Slow. Ngokwesibonelo, ukususa ukwahlukanisa, inani okuyinto 40 GB, kuthatha cishe eziyishumi imizuzu isikhathi.
Acronis Disk Umqondisi
Inkampani isofthiwe Acronis, kumele kube ethandwa kakhulu phakathi umhleli disk. It ikuvumela ukuba enze konke ukusebenza ethandwayo: ukudala ngodonga, ushintsho ubukhulu ikhophi HDD kwenye, uhlangane futhi imiqulu okuhlukene. Phela izinguquko basuke emgqeni futhi angeke zisetshenziswe ukuze ngemvume yomsebenzisi.
Acronis Disk Umqondisi kusuka abanye abahleli izingxenye ezahlukene izindlela esakhelwe wokubuyisela amavolumu. Uma, phakathi nesimiso ukwehlukana idrayivu kanzima ngenxa yokuhluleka ukususa noma kulimaze etafuleni ukwahlukanisa, ithuluzi kungaba ukusebenzisa yokutakula Isazi, okuyinto uzothola futhi utakule amavolumu ukususwa.
Inguqulo, download free, ayinakho imikhawulo yesikhathi ngokusetshenziswa kwayo. Nokho, kuquthiwe ezinye zisebenza kahle. Ngokwesibonelo, ngeke ukwazi ukuguqula a GPT MBR, clone ukwahlukanisa eyinhloko, ukwenza ukuthi main, uma kunengqondo. Ukuze ususe imingcele, kuyodingeka bakhokhe $ 50.
Ukufaka uhlelo kuyashesha futhi kulula, ngeke zibangele noma iyiphi nobunzima ngisho saqala. I esibonakalayo kuwindo sifana EaseUS futhi ulwazi ngangokunokwenzeka.
Uhlu ubonisa bonke ngemoto nemiqulu, ngaphandle kohlelo ejwayelekile ubonisa isikhala kwi ngamunye, uhlelo uhlobo lwefayela, isikhala unallocated. Okuwukuphela ethile zohlelo - ngeke sisebenze ngodonga non-letindzala "on the fly". Ukuze enze hard disk drive division, Windows 7 kumele liqaliswe phansi.
Uhlelo Security. Indlela ukuvimbela buyekeza ngokuzenzekelayo Windows 7
Anna Berseneva: The novel best of the author